Resaky ny mpitsimpona akotry : andrasana ny laminasa anjaran’ny fanjakana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : andrasana ny laminasa anjaran’ny fanjakana
Raha tarafina amin’ny sary nalaina avy eny an’habakabaka dia midadasika ny faritra mangadihady eto amin’ny Nosy. Efa am-polo-taonany maro izay no nahitana hetsika fambolen-kazo notanterahin’ny sampan’ny mponina maro karazana, na fikambanana izany na fiarahamientan’ny mpampiasa sy mpiasa ao amin’ny orinasa, na antoko pôlitika, tsy tambo ho tanisaina intsony…, nefa mbola izao ihany ny toe-tany. Ny toetr’andro koa moa efa mandodona, mananintanina ny hain-tany. Mandindona toy izany ny loza. Manao izay vitany ny mponina, anisan’izany ny fanefan’ny Leader-Fanilo ny anjarany tamin’ny sabotsy teo.
Tsy ny hetsi-bahoaka mihitsy akory no afaka hianteherana mba handrakofana ala ireo faritra efa mivadika ho tany karankaina. Adidin’ny fanjakana izany, ary araky ny fantatra dia mety ho loharanon-karena aza ny fisikinana amin’ny fanamaitsoana ny tany.
Misy tambiny, asa takalo harena, any ambadika any toy ilay atao hoe “crédit-carbone”, sady mitarika famoronana asa (izay tsy ampy eto amin’ny tanàna) no misy tombony ara-bola ho an’ny fanjakana. Fahaizana mandamina asa ve no tsy ampy sa hakamoana no betsaka? Sao kosa ny fanetren-tena hanao ezaka raha tsy misy tombo-tsoa mivantana ho any am-paosy no tsy ananana?
Manana anjara toy ireny moa ny antoko pôlitika ho fitaizana ny mpikambana ao aminy sady ho fanentanana ny vahoaka manodidinina, mba samy ho tonga saina sy samy handray ny adidiny amin’ny maha olom-pirenena azy. Manana ny tandrify azy daholo eo amin’ny fitsinjarana andraikitra. Raha mijery manodidina dia miverina indray ny fanontaniana, aiza ary ny lesoka ary inona no andrasana?
Ny ala miha manify andro aman’alina. Ny didy fanerena amin’ny fanasosohana an’izay nosimbaina, araky ny fiteny hoe fambolena solofo dimbin’ny ala, tsy mipetraka. Ny ady amin’ny doro tanety sy ala tsy misy fandaminana ara-penitra. Mbola ho resahina koa ve ny ataon’ny mpanondrana andramena izay lazaina fa antsokosoko nefa miharihary toy ny kary an’efitra, tsy hay na tsy tiana ho fehezina nohon’ny mpitik’afo izay fantatra fa misy, tazana mahabolanginy ireo tompon’andraikitra isam-baratongany mifandimby toerana.
Tokony handaitra ao an-tsain’ny mponina ireny hetsika fambolen-kazo ireny, fa rehefa jerena ny vokany an-kapobeny eto amin’ny nosy, izay na te hirongatra ny vahoaka na milavo lefona.